GNOME 41 inouya nekugadzirisa patsva, mapaneru, maapplication uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Darkcrizt | 22/09/2021 10:17 | Yakagadziridzwa ku 23/09/2021 00:32 | Applications
Mushure memwedzi mitanhatu yekukura kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yedesktop nharaunda GNOME 41 iyo inouya nenhamba hombe yeshanduko dzakakosha dzayo dzinonyanya kukosha dziri semuenzaniso iyo kuwedzera mikana yekugadzirisa kushandiswa kwesimba.
Iko kugona kwekukurumidza kushandura iyo yekushandisa nzira yekushandisa inopihwa kuburikidza nehurongwa mamiriro mamiriro manejimendi. Zvikumbiro zvine kugona kukumbira iyo chaiyo simba rekushandisa maitiro; semuenzaniso, mitambo inoenderana nekuita inogona kukumbira mhando-yemhando kuita kuti iitwe.
Chimwe chiitiko chinoratidzwa ndicho itsva sarudzo dzekugadzirisa simba rekuchengetedza maitiro, ichikubvumidza iwe kudzora kudzima kwescreen, kudzima iyo skrini mushure menguva yakati yekusaita kwekushandisa, uye wozoidzima yega kana bhatiri radzikira.
kunze kwaizvozvo iyo interface yekutarisira kuiswa kweapplication yakagadzirwazve, iyo inorerutsa kufamba uye kutsvaga zvirongwa zvekufarira. Izvo zvinyorwa zvinyorwa zvakagadzirwa semamwe mapepa anotsanangurwa ane tsanangudzo pfupi. Seti nyowani yezvikamu yakarongedzwa kupatsanura kunyorera nemusoro wenyaya.
Uye zvakare iro peji rine ruzivo rwakadzama nezve chishandiso rakagadzirwazve, mune iyo saizi yeiyo screenshots yakawedzerwa uye neruzivo rwemukati rwechimwe nechimwe application chawedzerwa. Uye zvakare, marongero ezvirongwa uye zvinyorwa zvemapurogiramu nezvirongwa zvakatomisirwa izvo zvine zvigadziriso zvakagadzirwazve.
Kune rimwe divi, tinogona kuzviwana iyo nyowani multitasking pani yakawedzerwa kune iyo configurator (GNOME Control Center) kugadzirisa windows uye desktop desktop.
Kunyanya, muchikamu cheMultitasking, sarudzo dzinopihwa kuti dzimise iyo yekutarisa nzira yekufona kubaya kona yekumusoro kuruboshwe kwechiratidziri, uchidzoreredza hwindo nekukwevera naro kumucheto kwechidzitiro, kusarudza huwandu hwematafura chaiwo, kuratidza madhesiki pane anowedzera akabatana monitors, nekuchinja pakati pekushandisa kwazvino desktop chete nekutsikirira iyo Super + mubatanidzwa Tab.
Uyezve a new Connections app inosanganisirwa ine mutengi kuitiswa kweiri kure desktop desktop uchishandisa VNC uye RDP protocols. Iko kunyorera kunotsiva mashandiro ekuwana kure desktop desktop iyo yakambopihwa mumabhokisi.
Iyo GNOME Music interface dhizaini yakagadzirwazve, mune iyo saizi yemifananidzo yakawedzerwa, makona akapoteredzwa, kuratidzwa kwemifananidzo yevaimbi yakawedzerwa, iyo yekudzoreredza control panel yakagadzirwazve.
Iyo Mutter hwindo maneja kodhi base yakave yakacheneswa kumusoro kunatsiridza kugona uye kurerutsa kugadzirisa.
Optimized interface yekuita uye kupindura.
Muchikamu cheWayland-chakavakirwa, iyo yekumhanyisa yekuvandudza iyo ruzivo pachiratidziro yakawedzerwa uye yekuita nguva yekukosha uye yekufambisa kwekufambisa kwakapfupiswa.
Kuvandudzwa kwekuvimbika uye kufungidzira kweakawanda-kubata kubata kwekubata.
Iyo kalendari yekuronga ikozvino inotsigira kupinza zviitiko uye kuvhura ICS mafaera.
Chidziro chitsva chakakurudzirwa neruzivo nezve chiitiko.
Epiphany browser yakagadzirisa iyo yakavakirwa-mukati PDF inotarisa PDF.js uye yakawedzera yeYouTube ad blocker inoenderana neAdGuard script.
Iyo itsva Mobile Network pani yakawedzerwa kugadzirisa kubatana kuburikidza nevashandisi venhare.
Iyo Calculator interface yakagadziriswazve zvizere, izvozvi inozvigadziridza kune iyo saizi saizi pane nhare mbozha.
Yakawedzera rutsigiro rwezvikamu mune yekuzivisa system.
GDM ikozvino yave nekwanisi yekutanga Wayland-based zvikamu kunyangwe iyo yekupinda skrini iri X.Org-based.
Zvirongwa zveWayland zvinotenderwa masisitimu ane NVIDIA GPUs.
Maitiro ekuwana kana kuyedza iyo nyowani vhezheni yeGnome 41?
Kune avo vanofarira kuongororwa nekukurumidza kwehunyanzvi hweGNOME 41, yakasarudzika mhenyu inovaka yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE uye chifananidzo chekumisikidza chakagadzirirwa sechikamu cheiyo GNOME inoshanda system chirongwa chinopihwa, uye GNOME 41 inosanganisirwa muFedora 35 yekuyedza kuvaka.
Ndichiri pane chikamu chemapakeji ezvekugoverwa kwakasiyana, izvi zvichange zvichisvika mune imwe nguva yemaawa kunzvimbo dzekuchengetedza idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GNOME 41 inosvika nekugadzirisa patsva, mapaneru, maapplication uye nezvimwe